के तपाईंको दिउँसै सपना देख्ने बानी छ ? यस्ता छन् फाइदा - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips के तपाईंको दिउँसै सपना देख्ने बानी छ ? यस्ता छन् फाइदा
के तपाईंको दिउँसै सपना देख्ने बानी छ ? यस्ता छन् फाइदा
हामीले कसैले आफ्ना योजना सुनाउँदा व्यंग्य गर्छौं, ” दिउँसै सपना देखिस् कि के हो ?” । निदाउँदा त जोसुकैले सपना देख्न सक्छ, तर आफैमा हराएर, कल्पनामा रमाएर आँखा बन्द नगरी देखिएका सपना जीवनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सावित हुन सक्छन् ।
दिउँसो सपना देख्ने व्यक्तिको सोंच्ने शक्ति, कल्पनाशक्ति बढ्छ । जति पनि नयाँ आविष्कार, नयाँ ‘आइडिया’ जन्मिन्छन् , ती सबै नयाँ सोंच र कलापनाशक्तिबाट जन्मिन्छन् ।
दिउँसो सपना देख्दा व्यक्तिले त्यही देख्छ, जसमा उसले रुची राख्छ, जसमा उसको मन जान्छ । त्यसैले उसलाई आफ्नो रुचि थाहा पाउन र आफ्नो करियर छनोट गर्न मद्दत पुग्छ । तिनै सपनाले गर्दा ऊ आफै केही गर्न उत्प्रेरित भइरहेको हुन्छ ।
जब कल्पना गर्दै व्यक्तिले सपना देख्न थाल्छ तब उसमा सिर्जनात्मक क्षमता बढ्छ । उसको दिमागमा नयाँ-नयाँ कुरा आउन थाल्छन् । यदि त्यो सिर्जनात्मक क्षमतालाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यही दिउँसो सपना देख्ने बानीले उसको परिचय बनाइदिन सक्छ ।
दिउँसो सपना देख्ने बानीले व्यक्तिले त्यसमा आफ्नो लक्ष्य खोज्छ र भेट्छ । र त्यही आधारमा उसले आफ्ना भावी योजनाहरु समेत बनाउन थाल्छ । यसले गर्दा दिउँसो सपना देख्ने बानी मार्गनिर्देशन पनि बन्न सक्छ ।
एकोहोरो बानीले अनावश्यक तनाव बढ्छ । तर, दिउँसो सपना देख्ने व्यक्ति ती तनावबाट केहीछिन भएपनि टाढा बस्छ । नयाँ सोंच र सपनाले गर्दा उसको दिमाग ताजा, ऊर्जाशील र सकारात्मक रहन्छ । ऊ जीवनप्रति आशावादी रहन्छ ।
Previousमार्क जुकरबर्गका प्रेरक भनाइहरु
Nextपाब्लो पिकासोका प्रसिद्ध भनाइहरु